Somaliland waxay noqotay: " Waraabe UL-na lala Gaadhi Waa, Cayna wax laga guri Waa".
Tuesday April 03, 2018 - 13:41:00 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Waxaa beryahanba isa soo tarayey cadaawadda Dawladda Somalia, iyadoo muddooyinkan dambe la timid dar-dar cusub
iyo colaad dabarka goosatay balse aanay meelna ku gaadhi karin . Dagaalka Somalia kula jirto Al-Shabaab waxa ka xun kan ay kula jirto Somaliland. Dawladda
Dacwadda Taliska Xamaray geysay Qaramada Midoobay waa Tallaabbo cadaawad annaga naloola dan leeyahay, waa gef iyo gardarro aan geedna loogu soo gabban oo lagula kacay xuquuqa iyo danaha Somaliland.
Dhanka kale, isku day'ga la wareegidda Hawada Somaliland waa daandaansi, xadgudub iyo weerar halis ah oo lagu soo qaaday Qaranimada Somaliland.